बलिउडमा सन्नी लियोनीको करिअर संकटमा - eNayapusta
एजेन्सी ८ फाल्गुन २०७६, बिहीबार ०४:२७ 285 पटक हेरिएको
मुम्बईः पछिल्लो तीन वर्षदेखि सन्नी लियोनी कुनै ‘लिड रोल’मा देखिएकी छैनन्। अहिले उनको हातमा कुनै यस्तो फिल्म आएको छैन, जसमा उनी मुख्य भूमिका देखिऊन्। एक–दुई वर्षमा आएका फिल्ममा पनि उनी सानातिना भूमिका र गीतमा मात्रै देखिइन्।
उसो भए के बलिउडमा सन्नी लियोनीको माग सकिएको हो? निर्माता–निर्देशकले उनलाई लिएर फिल्म बनाउँदा फाईदा नदेखेका हुन्?
गुगलमा सर्वाधिक खोजिने नायिकामा सन्नी छन्। हरेक वर्ष उनको नाम गुगलमा सर्वाधिक खोजिने नायिकामा पर्छिन्। यद्यपि, उनको लागि फिल्ममा कुनै स्थान छैन।
उसो त सन्नीलाई फिल्म खेल्न रुचिनै नभएकोचाहिँ होइन। साथै, अहिले पनि निमार्ता–निर्देशक उनलाई लिएर फिल्म बनाउन चाहन्छन्। तर, जुनखाले फिल्म सन्नी खेल्न चाहन्छन्, त्यसखाले फिल्मको अफर उनलाई आएकै छैन।
बी र सी ग्रेडका फिल्म निर्मातामात्रै सन्नीलाई भेट्न पुगिरहेका छन्। त्यस्ता फिल्ममा सन्नी आकर्षक मसला बन्न सक्छन्, जसमा केही कामुक दृश्य समावेश भएका हुन्छन्। तर, यसखाले फिल्मदेखि सन्नीले दुरी बनाएका छन्।
उता ठूला फिल्ममा भने सन्नीलाई स्थान छैन। हुन पनि अहिलेसम्म सन्नीले आफू अब्बल नायिका भएको प्रमाणित गर्ने त्यस्तो कुनै अभिनय गर्न सकेकी छैनन्। यसैले ठूला बजेटमा स्टार कलाकार लिई फिल्म बनाउनेहरुले उनीसँग दुरी बनाएका छन्।
अजिब त यो छ कि, सन्नी जोसँग काम गर्न चाहन्छन्, उनीहरु सन्नीसँग काम गर्न चाहँदैनन्। र, जो सन्नीसँग काम गर्न चाहन्छन्, उनीहरुसँग सन्नी काम गर्न चाहँदैनन्। यसैले सन्नी कुनै पनि फिल्ममा नदेखिएका हुन्। यसैले सवाल उठ्ने गरेका छन् कि अब सन्नीको करिअर बलिउडमा लगभग सकिएकै हो त?